​झोलुंगे पुल तर्ने सपना अधुरो
Sunday, 31 Dec, 2017 1:21 PM
सर्लाही, १६ पुस । सामान्यतया झोलुंगे पुल बनाउन कति महिना लाग्ला ? ६ महिना १ वर्ष २ वर्ष ? तर सर्लाहीको हरिवनमा भने ५ वर्ष बितिसक्दा पनि झोलुंगे पुल निर्माण अधुरै भएको छ । हरिवन नगरपालिका २ अत्रौलीमा ५ वर्षअघि निर्माण थालिएको झोलुंगे पुल अझै निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीय निराश भएका हुन ।
स्वीस हेल्भेटासको ३३ लाख आर्थिक सहयोगमा जिल्ला विकास समितिमार्फत उपभोक्ता समिति बनाएर झिम नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण संस्थाले २०६९ सालमा निर्माण सुरु भएको पुल अझै सम्पन्न नहुदाँ स्थानीय निरास भएका हुन् ।
२ वर्षमा निर्माण सक्ने गरी काम थालिएको भए पनि ५ वर्ष विति सक्दा समेत पुलको निर्माण अझै सम्पन्न नहुँदा स्थानीय निराश त भएका छन् नै पुल समेत प्रयोगविहीन भएको छ । तर निर्माणको जिम्मा लिएको संस्थाले भने २०७० को संविधान सभाको चुनाव, भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधी सभा सदस्यको चुनाव लगायतको कारण पुल निर्माणले तिव्रता पाउन नसकेको बताएको छ ।
त्यस्तै ६ महिने भारतीय नाकाबन्दीका कारण निर्माण सामाग्रीमा भएको अभावको कारण पनि निर्माणमा ढिला सुस्ती भएको ठेकेदारले बताएको छ । पुल निर्माणको करीब ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । पुलको दायाबाया खुट्किलाहरु निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्न मात्रै बाँकी रहेकोले अर्को हप्ता सम्ममा काम सम्पन्न हुने झिम नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण संस्थाका इन्दल यादवले बताउनु भयो ।